Cuntooyin Laga Helo Dalka Oo U Fiican Caafimaadka Timaha, Kana Caawiya Koritaanka Iyo In Aanay Daadan | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: January 15, 2017, 7:21 pm
(0) Comments Sida caadiga ah khubarada caafimaadku waxa ay caddeeyeen in nafaqada cuntada qaarkeed iyo wareegga dhiigga oo si sax ah oo caafimaad qabta u socdaa ay ka mid yihiin waxyaabaha ilaaliya quruxda iyo bixitaanka timaha.
Qormadan waxa uu Kobciye.com ku soo ururinayaa qaar ka mid ah Cuntoooyinkaas ay xeeldheereyaashu sheegeen in ay u fiican yihiin caafimaad timaha, gaar ahaan cuntooyinka laga helo dalkeenna.
1. Ukunta: Waxa uu nadiifiyaa godadka maqaarka ee tintu ka soo baxayso baxdo, waxa aanu xoojisaa timaha oo go’ista ka uu ka ilaaliyo.
2. Dabacasaha: Khudraddan oo si guudba ugu fiican caafimaadka ayaa la xaqiijiyey in uu wanaajiyo habsami u wareegga dhiigga si uu u gaadho timaha jirriddooa, sidaa awgeedna timaha ayaa xoogeysta si fiicanna u baxa.
3. Muus iyo Afakaadho: Haddii labadan khudradood la isku daro kadibna iyaga oo sida cajiinka ah timaha la mariyo (Dahaadho) waxa ay xoojiyaan timaha, oo ay siiyaan faytamiinno muhiim ah, oo timaha ka caawiyoa in ay baxaan, iyo go’itaankooduna yaraado. Isla markaana midabkoodu dabiici dhalaalaya ku soo noqdo.
4. Kalluunka Solomoon: Waxaa uu hodan ku yahay dufanka asiidh ee Omega3 waxa aana laga helaa faytamiinnada E iyo D, sidaa awgeed waxa ay dhakhaatiirtu ku taliyaa in ugu yaraan saddex jeer toddobaad kasta la cuno. Kalluunnka Solomoon waxa uu timaha ka bi’iyaa qallalka iyo busaaradda, waxa uu ka ilaaliyaa daadashada, waxa aanu ka caawiyaa in ay baxaan, midabkooda dabiiciga ahna soo ceshadaan.
5. Koostada: Caleenta Koostada oo afka carabiga Sabaanikh lagu yidhaahdo, (Spinach) waxaa laga helaa nafaqo muhiim ah, waxaaanay caan ku tahay faytamiinno ay ka mid yihiin B, C, E, sidoo kale waxaa ku jira Bootaasiyaam, Kalshiyaam, Omega3, Magnasiyaam iyo Xadiid, marka laga tago faa’idada ay faytamiinnadan iyo maaddooyinkan kala duwan u leeyihiin caafimaadka guud, waxa ay sidoo kale u fiican yihiin caafimaad timaha. Tusaale ahaa xadiidku waxa uu caawiyaa in ogsajiinta dhiiggu ay gaadho timaha, isku darna waxa ay maaddooyinkani timaha u soo celiyaan quruxda, iyo bixitaanka dabiiciga ah.
6. Cadaska: Cadasku waa il muhiim ah oo laga helo maadadda Zinc, waxa aanu jidhka kala dagaalamaa sumowga. Maadadda Zinc waxa ay caawisaa bixista timaha, waxa aanay furtaa qanjidhada saliidda ee saanta madaxa. In qofka maadadda Zinc ku yar tahay calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in timuhu daataan.
7. Hilibka Digaagga: Hilibka digaaggu waa il muhiim ah oo laga helo Barootiinta timuhu u baahan yihiin, haddii ay waayaan ama ku yaraatana ku keena daadashada, basaasta iyo in midabkoodu guuro. Barootiinta laga helo hilibka digaaggu waxa ay timaha ku kordhisaa caafimaad waxa aanay ka caawisaa bixitaanka.
« Warbixinta Ka HoreysaySAWIRRO:- Warbixin Cajiib ah Haweeney 40 sano ka hor u geeriyootay qaniinyo Mas oo iyadoo nool ku soo laabatay gurigeeda	Warbixinta Xigto »Sawiro iyo Video laga duubay Gabar lagu Kufsaday GALDOGOB oo Xiisad abuuray & Ehelada Gabadha oo hadashay	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply